Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » CDC: Izay vaksiny nankatoavin'ny OMS dia tsara amin'ny fidiran'i Etazonia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny fanefitra novolavolain'i Pfizer-BioNTech, Moderna ary Johnson & Johnson dia ankatoavina any Etazonia ankehitriny - ny roa farany amin'ny fampiasana vonjy maika fotsiny - raha ny WHO kosa dia nanohana jab avy tany AstraZeneca / Oxford, Sinopharm ary Sinovac ho fanampin'ireo telo efa voatonona .
Vaksinina enina nahazo alalana / nankatoavin'ny FDA na voatanisa ho an'ny fampiasana vonjy maika avy amin'ny OMS no hahatratra ny mason-tsivana amin'ny fitsangatsanganana any Etazonia.
Ny fanehoan-kevitry ny CDC dia tonga herinandro taorian'ny nilazan'ny White House fa hanafoana ny famerana ny fivezivezivezena avy amin'ny firenena 33.
Ny CDC koa dia nanamafy fa nampahafantatra ireo zotram-piaramanidina isan-karazany ny lisitr'ireo jab COVID-19 nankatoavina.
Nilaza ny mpitondra tenin'ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) fa ny vaksinin'ny COVID-19 nankatoavin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) dia avela ho an'ireo vahiny mitsidika an'i Etazonia.
"Vaksiny enina omena alalana / ekena na voatanisa amin'ny fampiasana vonjy maika avy amin'ny OMS no hahatratra ny mason-tsivana amin'ny fitsangatsanganana any Etazonia," a CDC hoy ny mpitondra teniny, raha ny loharanom-baovao.
Immunisations novokarin'i Pfizer-BioNTech, maoderina ary Johnson & Johnson dia ekena any Etazonia ankehitriny - ny roa farany amin'ny fampiasana vonjy maika fotsiny - raha ny WHO kosa dia nanohana jab avy tany AstraZeneca / Oxford, Sinopharm ary Sinovac ho fanampin'ireo telo efa voatonona.
Ny fanehoan-kevitry ny CDC dia nanjary herinandro taorian'ny nilazan'ny White House fa hanafoana ny famerana ny fivezivezivezena avy amin'ny firenena 33, napetraka voalohany mba hanakanana ny fiparitahan'ny COVID-19, tamin'ny volana novambra lasa teo. Saingy, tamin'izany fotoana izany, tsy nilaza mazava izay fanefitra hatao mendrika.
Taty aoriana ny zoma, nanamafy ihany koa ny CDC fa nampahafantatra ireo seranam-piaramanidina isan-karazany ny lisitr'ireo jabs nankatoavina, ary nanampy fa ny masoivoho ara-pahasalamana dia "hamoaka torolàlana fanampiny sy fampahalalana rehefa vita ny fepetra takiana amin'ny dia."
Fikambanana iray misolo tena ny mpitatitra fiaramanidina marobe, Airlines for America, no nanamafy izany fanambarana izany, ary nilaza fa "faly tamin'ny fanapahan-kevitry ny CDC ny hanaiky ny lisitry ny vaksiny nahazo alalana ho an'ireo mpandeha niditra tany Etazonia."
Oktobra 9, 2021 ao amin'ny 19: 26
Comirnaty ihany no ankatoavin'ny FDA. Pfizer-BioNTech dia EUA toa an'i Moderna sy J&J. Nosoratana mazava tao amin'ny antontan-taratasin'ny FDA (Approval Letter, FAQ ho an'ny Comirnaty (COVID-19 Vaccine mRNA) ary Letter Of Autorisation (naverina). Nandeha tany amin'ny fivarotana rongony roa aho ary toa mbola tsy naheno an'i Comirnaty mihitsy.